Gefkii Ciidankii Cirka Soomaaliyeed Galay 1977, ex-G/le Sare Omer Suleiman Ali | Araweelo News Network (Archive) -
Anigu waxaan ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidankii cirka Jamhuuriyadii Soomaaliyeed, isla markaana si buuxdana ugu ahaa xog ogaal maamulka ciidanka cirka waayo waxaan muddo dheer madax ka ahaa xafiiska ciidanka iyo maamulka ee cirka. Waxaan kusoo
bartay maamulka iyo dagaal gelinta ciidamada cirka Jaamacadda ciidamada cirka ee Maraykanka ee ku taal Alabama magaalada Montogomary. Ciidanka cirka waxaa taliye ka noqon kara ruux kasta oo soo barta dagaal gelinta ciidanka, xilkiisuna waa in uu saraakiisha iyo ciidankaba siiyo taba barro ku saabsan habka ay dalka u daafici lahaayeen ee ma aha in uu dhismayaasha dayac tiro.
Waxay Soomaalidu tidhaahdaa quraan alifka ka qalloocday Al-Baqra kama tooso. Waxaan uga jeedaa haddii uu maamul ka qaldamay bilawga fashil ayuu ku dhammaadaa.
Markii uu ciidanku yeeshay dayuurado fara badan oo isugu jira kuwo dagaal iyo kuwo gaadiid ah ayaa loo baahday in la qoro xeerkii lagu maamuli lahaa ciidanka cirka Soomaaliyeed. Markaa ayaa la magacaabay guddi duuliyeyaal ah oo soo diyaariya xeerkii ciidanka cirka lagu maamuli lahaa.
Gudidaa ayaa soo qaatay buug ah xeerka ciidamada cirka ee Midawgii Sofiyeti oo ku dhigan afka ruushka. Saraakiishii waxay ku tashadeen in ay buuggaas ku beddelaan afka Soomaaliga.
Qodob ka mid ah ayaa wuxuu lee yahay taliyaha ama urur ama guuto ciidan cir ah waa in uu ahaado duuliye. Arrinkaasi waa sax hase yeeshee macnaha qodobku sidaas ma aha hase yeeshee waxay qoreen taliyaha saldhigga iyo taliyaha ciidanka waa in uu ahaado duuliye.
Hawlaha dhismaha iyo dayac tirka saldhigga waxaa iska leh oo ay tahay in ay qabtaan hay’ado rayid ah oo ganacsada. Maamulka lacagta waxay tahay in ay qabtaan dad ka socda wasaaradda maaliyadda ama dad rayid ah oo lagu qaatay aqoonta maamulka lacagta. Dayac tirka garoonka dayuuradaha waa in ay fuliyaan ganacsato. Soomaaliya waxaas oo dhan ciidamada ayaa qaban jiray, haddii ciidamada loo diro in ay beero falaan waxay berri gebayaan in ay dalka cadawga ka daafacaan.
Haddii aan soo ururiyo qof waliba waa in aan loo idman wax aanu shaqo ku lahayn.
Ciddii doonaysa in ay ciidanka cirka iyo 77kii wax ka ogaato ha igala soo xidhiidho